Uyilo lwezixhobo zasekhaya lwase China Umenzi kunye noMthengisi | Mestech
Uyilo lwezixhobo zasekhaya kukuphuhlisa inkangeleko kunye nezinto zangaphakathi zasekhaya. Oku kuquka uyilo iinxalenye zeplastiki kunye namalungu zesinyithi.
Kule mihla, iimfuno zabantu kwizixhobo zasekhaya ayisiyomisebenzi kuphela, kodwa kunye neemfuno zobuhle zembonakalo eyahlukileyo, eyenzelwe wena kunye nobugcisa.
Uyilo lwezixhobo zombane zasekhaya lusekwe kwinto yeplastikhi kunye nakwizinto zesinyithi, zidityaniswa nomqondo wobugcisa wabantu kunye nesakhiwo esisebenzayo semveliso, kusetyenziswa isoftware yoyilo lwe-3D ukuyila inkangeleko kunye nolwakhiwo lwemveliso, kwaye ekugqibeleni imveliso yemizobo yokubumba kunye nezahlulo zemveliso.
IMestech ibonelela abathengi ngolu hlobo lulandelayo lwemveliso ye-elektroniki kunye nemveliso:
(1) izixhobo zekhaya zobuqu: ikakhulu kubandakanya isomisi seenwele, isitshixo sombane, intloko yombane yentsimbi, ibhrashi yamazinyo yombane, isixhobo sobuhle se-elektroniki, ukubhucungwa ngombane, njl.
(2) Ukusetyenziswa kweemveliso zedijithali: ikakhulu iikhompyuter zethebhulethi, izichazi magama zombane, oomatshini bokufunda isundu, oomatshini bezemidlalo, iikhamera zedijithali, iimveliso zemfundo yabantwana, njl.
(3) izixhobo zasekhaya: ikakhulu kubandakanya iaudiyo, isifudumezi sombane, isichumisi, isicoci somoya, isixhobo sokuhambisa amanzi, intsimbi yentsimbi, njl.
Uyilo lwemveliso yekhaya elektroniki
Ikhonsoli yomdlalo wePalm
Umatshini wokufunda ngelizwi labantwana
Iprojektha yosapho yedijithali
Iimpawu zoyilo lwezixhobo zombane zasekhaya
Uyilo lwezixhobo zombane zasekhaya kuyilo lokubonakala, uyilo lwesakhelo ngokubanzi kunye noyilo lweenxalenye ezithile. Ngokungafaniyo nezixhobo zeshishini,
(1) Gxininisa uyilo lwembonakalo ebonakalayo, iimpawu kunye nokuzenzela.
Gxininisa kumava abasebenzisi. Ezifana nokusebenza obutofotofo, kulula ukuyiphatha, indawo engenamanzi
(3) .Gxila kubungakanani, umthamo kunye nobunzima beyunithi yemveliso.
(4) .Isiqhelo, uhombise ukubonakala kweemveliso ngoncedo lokwenza ubugcisa, ukuprinta, ukupeyinta, isikrini sesilika kunye nenye inkqubo yonyango yomphezulu.
2. Ngenxa yemihla ngemihla yokunxibelelana nomzimba womntu, izixhobo zombane zasekhaya zineemfuno ezingqongqo zokhuseleko
(1). izinto ezisetyenzisiweyo azinabungozi kumzimba womntu Kukho iintlobo ezintathu zemigangatho yeRoHS, ukufikelela kunye ne3C e China. Izinto ezinobungozi eziqulethwe kwimigangatho yamacandelo emveliso
(2) Imitha ye-Electromagnetic ayiyi kuba ngaphezulu komgangatho wokhuseleko owamkelweyo ngumzimba womntu Imitha ye-Electromagnetic inokuchaphazela impilo yabantu. Iimveliso ze-elektroniki, ngakumbi iimveliso zonxibelelwano ezixhomekeke kwimiqondiso engenazingcingo, ziya kukhupha imitha yombane. Kuyilo lweemveliso ezinjalo, kunyanzelekile ukunciphisa ixabiso lemitha yombane ukuya kuluhlu olukhuselekileyo.
(3) Ukufakwa kombane: kwezinye izixhobo zasekhaya ezinamandla aphezulu asebenzayo (i-AC), ukuvuza okungafunekiyo, ukufakwa kwesoyile okanye uyilo olungangeni manzi kufuneka lwenziwe kuyilo lwemveliso ukunqanda iingozi zokhuseleko.
IMestech ibonelela abathengi ngoyilo lwe-OEM, ukuvelisa ukungunda, imveliso yamalungu kunye nokuhlangana kweemveliso eziqhelekileyo zekhaya zombane. Ndiyathemba ukuba abathengi abanesidingo sokunxibelelana nathi, siya kukubonelela ngeyona nkonzo yethu intle.
Egqithileyo Uyilo lwezindlu zombane
Okulandelayo: Uyilo lwemveliso yeplastiki
Iiplastiki zeplastiki zentambo kunye nocingo